Edere site Tranquillus | Mar 24, 2021 | Edere ederede na nkwupụta okwu ọnụ
Ide ederede na ọrụ adịghị mfe dịka ị nwere ike iche. N’ezie, ọ dịghị ka mgbe ọ na-edere ezigbo enyi gị akwụkwọ ma ọ bụ na mgbasa ozi. Nke a bụ ya mere o ji dị mkpa iji gbalịa imeziwanye ederede ọkachamara gị kwa ụbọchị. N'ezie, ụwa ọkachamara na-achọ ka ederede ọrụ dị irè. N'ihi na aha ụlọ ọrụ ị na-arụ ọrụ dabere na ya. Chọpụta n’isiokwu a ka esi eme ka ahịrịokwu nke ide ihe ka mma.
Chefuo okwu okwu
Iji meziwanye ahịrịokwu nke ọrụ na-arụ ọrụ, bido site na iwepụ akara ngosi nke okwu n'ihi na ịnọghị n'ọnọdụ ederede. Yabụ, ị gaghị achọ ihe atụ, ilu, nkọwa, wdg.
Mgbe ị tinyere ihe ize ndụ nke iji ọgụgụ isi okwu mee ihe mgbe ị na-ede akwụkwọ na-arụ ọrụ, ị nwere ike ịpụta ịbụ onye nzuzu n'anya onye na - agụ ya. N'ezie, onye a ga-atụle na ị nọrọ n'oge ebe jargon maara otu esi etinye nsọpụrụ na ụjọ na ndị na-agwa gị okwu.
Debe ozi ndị dị mkpa na mbido ahịrịokwu ahụ
Iji melite ahịrịokwu na ederede ọrụ gị, tụlee itinye ozi ahụ na mbido ahịrịokwu. Ọ ga-abụ ụzọ isi gbanwee ụdị gị ma kewapụ onwe gị na isiokwu ochie + ngwaa + mgbakwunye.
Iji mee nke a, ị nwere ọtụtụ nhọrọ:
Iji ihe eji eme ihe n'oge gara aga dị ka adjective : dịka ọmụmaatụ, nwere mmasị na onyinye gị, anyị ga-akpọtụrụ ibe anyị ọzọ n'izu na-abịa.
Ihe edoziri na mmalite : le 16 février dernier, nous vous avons envoyé un mail…
Nkebi ahịrịokwu na infinitive Iji soro na nyocha anyị, anyị na-akpọsa nkwado nke ngwa gị ...
Iji ọdịdị na-abụghị onye
Imelite ederede gị na ọrụ pụtakwara iche echiche banyere iji usoro na-abụghị onye. Ọ ga - abụ ajụjụ ibido “ya” nke anaghị egosiputa ihe ọ bụla ma ọ bụ onye ọ bụla. Dịka ọmụmaatụ, a kwenyere na anyị ga-ezighachi onye na-ebubata ya n'otu izu, ọ dị mkpa ịlaghachi usoro ahụ, wdg.
Dochie ngwaa eji esi mmiri ọkụ
Meekwa ka odide ọkachamara gị site na igbochi amaokwu ndị isi dịka "ịnwe", "ịbụ", "ime" na "ikwu". N'ikwu eziokwu, ndị a bụ ngwaa ndị na-emeghị ka ederede gị baa ọgaranya ma na-amanye gị iji okwu ndị ọzọ iji mee ka ahịrịokwu ahụ bụrụ nke ziri ezi.
Ya mere, dochie ngwaa ndi na eji okwu doro anya karie. Ga ahụ ọtụtụ oyiri nke ga - enyere gị aka iji nkenke ederede.
Kpọmkwem okwu kama periphrases
Periphrasis na-ezo aka n'iji nkọwa ma ọ bụ ahịrịokwu dị ogologo karịa okwu nwere ike ịchikọta ya niile. Ọmụmaatụ, ụfọdụ na-eji okwu “onye na - agụ ya” kọwaa “onye na - agụ ya”, “emeela ka ọ mata gị…” karịa “agwala gị…”.
Mgbe ahịrịokwu toro ogologo, onye nnata ya nwere ike ịla n'iyi ngwa ngwa. N’aka nke ọzọ, iji okwu ndị dị nkenke ma doo anya ga-eme ka ọgụgụ ihe dị mfe.
Kedu ka esi melite ogo ederede gị na ọrụ? Machị 25th, 2021Tranquillus
gara agaỌrụ ele mmadụ anya n'ihu: 100% mkpuchi na ngalaba ndị metụtara mgbochi ahụike
-esonụEnwere m ikike iji geolocation iji chịkwaa oge ọrụ nke ndị ọrụ?